Hadalkii Donald Trump : War waa kheyre daaya • Horseed Media
You are here: Home / Opinion / Hadalkii Donald Trump : War waa kheyre daaya
Hadalkii Donald Trump : War waa kheyre daaya
December 16, 2017 - By: HORSEED STAFF
Habeenkii ay taariikhdu ahayd 6dii bisha December 2017 markay saacadda geeska Africa ahayd sagaalkii habeenimo (21:00 PM ) ayuu Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ku dhawaaqay in dawladda Maraykanku u aqoonsatay Magaalada Barakeysan ee Qudus Caasimada Dawlada khasabka ku haysata dhulka falastiin ee Israel. Wuxuu intaa raaciyay in Safaaradda maraykanka loo raro magaaladda Qudus. Trump wuxuu cuskaday goáan soo baxay 1995 ee uu soo saaray Congresska maraykanka. Cajiib! Oo Qudus goormuu Maraykan yeeshay? Waxaa taa ka sii daran, Trump wuxuu ku andacooday in talaabadani horay u wadi doonto geedi socodka nabada ee bariga dhexe.
Qudus yaa leh ?
Magaalada Qudus waxay Israel qabsatay daanteeda bari 1967 kii ,dagaalkii 6da cisho ee ay carab ku jebisay.
Laga bilaabo 1948 dii waxaa Falastiin ku soo qulqulayay cid kasta oo sheegata diinta Yuhuuda. Haka yimaado qofkaasi Raashiya ama Itoobiya ama Poland ama Aasiyadda dhexe. Halka dadka carabta ah ee degenaa laga bara kicinayay dhulkoodii hooyo.
Waa cajiib in qofkasta oo sheegta diinta Yuhuudu uu xaq u leeyahay dhulka Falastiin. Taasi waxay la mid tahay anoo sheegtay magaalad barakaysan ee Maka, anoo daliishanaya in aan Muslim ahay
Qaramada midoobay, iyo mujtamaca dawliga ah waxay Qudus u aqoonsanyihiin magaalo ay xoog ku haysato dawlad isticmaar ah. Caalamka oo dhan sidaa ayuu u aqoonsanayhay marka laga reebo Donald Trump iyo Yuhuudda. Tani waxay xad gudub ku tahay Sharciyada Caalamiga ah iyo Xuquuqda dadka dhulka iska leh ee reer Falastiin.
Dhacdadani waa mid ugub ah oo ka leexanaysa shuruucda caalamiga ah iyo garashada aadanaha ee aan marna ogolaanayn in dhul xoog lagu qabsaday loo xalaaleeyo xoogagii boobka ku hantiyay.
Donald Trump Ma bixin karaa Qudus?
Caddalad darrada reer galbeedka waxaa ka mid ah inaad bixiso wax aadan lahayn oo aad siiso qof aan xaq u lahayn.
1917 kii Balantii Balfour ayay dawladda Ingriisku u balanqaaday Yuhuuda inay helaan dhul ay leeyihiin. Waxaa la kala dooran siiyay inay qaatan seddex wadan midkood:
1) dalka Ugandha 2) Arjantiin iyo 3) Falastiin
Yuhuudu waxay doorteen inay qaataan Falastiin maadama ay helayaan wax ay ku mar marsoodaan oo ah in dad reer Israaiil ah ay degi jireen Falastiin waqti waqtiyada ka mida.
Donald Trump ma bixin karo xaqna uma laha inuu Qudus siiyo Yuhuud. Israelna xaq uma laha inay khasab ku joogto dhul aysan lahayn.
Donald Trump muxuu ka helyaa bixinta Qudus?
Trump wuxuu ku marmarsooday in uu fulinayo balanqaadkiisii uu ku galay doorashada ee ahaa inuu safaaradda maraykanka Qudus u raryo, Qudusna u aqoonsan doono caasimad Israel.
Hase yeeshe , waxaa muuqata inuu taageero badan kaga raadinayay jaaliyadda dhaqaalaha badan haysata ee Yuuhuuda ah, xilli taageerada Trump ay hoos u dhacayso.
Sida dadka ku xeel dheer arimaha siyaasadda , in badan oo ka mid ah, ay isku raaceen wax dana oo ugu jirta talaabadan dalka maraykanka ma jirto. Taa lidkeeda , khasaaro ayaa ugu jirta talaabdan khaldan.
Waxaa waxa lagu qosla ahayd in Trump yiri ; Talaabadani waxay horseedaysaa in nabad waarta ka dhalato Dhulka Falastiin. Oo sidee uga dhalan kartaa , dhulkii laysku haystay haddaad Israel u aqoonsatay inay leeyihiin?
Maxaa Ka dhalan kara arintan?
Ma duugobo xaquu ninkii lahaa abidba daba joogo.
Ma doorsoomo ruuxii Illah doona taladiisa.
Duniduna ma aha maalin qura ee berra, imanin dabadeeda Shaki kuma jiro in arintani saameyn aad u qoto dheer ay ku yeelanayso Caalamka oo dhan, si gaar ah u saamayn doonto musliminnta iyo Carabta.
Ma fududaanayso in dadka reer falastiin lagu qanciyo in si nabada dhulka Falastin lagu soo dhiciyo. Qoraxda sideeda ayay u muuqataa in Israel ku socoto inay hesho dhul ka badan kan Falastiin oo aysan intaa ku joogsanayn. Maraykana intii u aragtay inuu wax dhex dhexaadinayo waa “Ishii buktaay ku bikaacso”
Sidaa darteed Waxaan u arkaa inay tani kheyr u tahay ummada muslimka ah oo dulmigu ku raagay.
Laga soo bilaabo 1924kii markii la riday khilaafadii Islaamka u dambaysay ee Suldan Cabil-Xamiid waxaa u talinayay ummada Muslimiinta ah, daba-dhilifyo reer galbeed u shaqaynay.
Waxaan rajaynayaa in tani noqoto kabriidkii lagu daaray dabka xoriyadda ee ummaddu u durrantay. Billowgii dhamaadka eexda iyo cadaalad darrad reer galbeedka iyo inta u shaqysa.Allow Aamin
Maxaa nala gudboon ?
Shucuubta muslimiinta iyo carabta Masiixiyinta ah waxaa la gudboon, ugu horayn in la garto in Maraykanka iyo Yuhuudu aanay ku dhiiran karin arin noocan oo kale ah , haddii aysan haysan xukuumadaha sharci darrada ee carabta oo runtii ah caddawga ay ummadaha leedahay. Inta ay joogaana aan rajo laga qabi karin xornimo iyo Sharaf.
Markaa waa in dagaalka lagu bilaabo iyaga. Waa tan saddexaade in ay shucuubtu midoowdo arintaana ay shucuubtu khasbaan.
Ugu dambayna,in aysan marna joojin isu soo baxa looga hortagayo dulmiga aan xadka lahayn ee uu Trump horseeday oo haddii aan falcelis adag laga samayn, lagana noqon, noqonaysa tallabo horseedda in Madina Munwara iyana la bixiyo, madaxda Sucuudigana ka durkaan dadkii reer khaybar oo guryahoodii ku soo nqonaya.
Waxaa qoray Xuseen Salaad